आठौं महाधिवेशनमा आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गर्ने : अध्यक्ष दाहाल « Image Khabar
आठौं महाधिवेशनमा आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गर्ने : अध्यक्ष दाहाल
११ पुष २०७८, आईतवार २०:०१
काठमाडौं, पुष ११ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा आफूहरुको आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गरिने बताउनुभएको छ ।
आइतबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी आजको दिनसम्म विचार, संगठन, संरचना, रणनीति र कार्यनीतिको सम्बन्धमा कहाँ चुक्यो त्यसको समिक्षा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका थिएनौँ । म सिंगो नेकपा(एमाले)का साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु, हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ । फेरी एकचोटी आत्मसमिक्षा गरौँ । कहाँ थियो त गल्ती ? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौँ ? के कारणले त्यत्रो सपना हामीले आफैले भत्कायौँ ? त्यसको समिक्षा गरौँ । हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ । हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन । हामीले यो देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पुरा गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ ।’
आइतवारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच दिनसम्म चल्ने भएको छ । सोमवार देखि बन्दशत्र सुरु हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।